Wednesday June 22, 2022 - 13:16:25 in Faalooyin by Waaberi News
Dalalka dunidu maanta waxay ku jiraan xaalad nololeed oo adag oo saamayn wayn ku leh maceeshadda iyo baahiyaha aasaasiga ah, sida shidaalka oo kale oo maalin kastaba qiimigoodu kor u kacayo. Jamhuuriyadda Somaliland xaaladdaa way la wadaagtaa caalamka.
Labadii sanno ee covid-19 isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee caalamku yaraaday ayey dhibaatadani bilaaban tahay. Waxaanu dhaqdhaqaaqii ka dambeeyey ee ku saabsanaa dedaalkii xawliga badnaa ee loo galay soo kabashada dhaqaalihii hoos u dhacay.
Duruufaha adag ee maanta lagu jiro waxa saamayn wayn ku leh isbeddelka cimilo oo ka dhasheen duufaanno iyo dabaylo, roob iyo daad, abaar iyo dab la sheegayo in baaxadooda aan hore loo arag amaba 50 illaa boqol sannadood ka hor dunida ay ugu dambeeyeen.
Dhammaan xaaladahani waxay waxyeelo u geysteen wax-soo-saarka beeraha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsigooda. Sidoo kalena qiimaha shidaalka ee cirka isku shareerayaana waxa uga sii daray dagaalka ka socda dalka Yukrayn.
Korodhka sicirka shidaalka xawliga lagu socdo waxa laga baqayaa inay ka dhashaan hoos u dhac wayn oo ku yimaada wax-soo-saarka beeraha iyo agabka bacrimintooda. Waxa kale oo yaraan doona dhaqdhaqaqa ganacsiga baahiyaha aasaasiga ah oo ay cuntadu ugu horeyso.
Xaaladda dunidu hadday sidan ku sii socoto oo aan wax isbeddel ahi ka dhicin, waxa laga baqayaa in dal kastaa wax soo saarkiisa baahiyaha maciishada ku saabsan uu joojiyo inuu dibadda u dhoofiyo, shacbigiisana u kaydiyo.
Duruufahan waxa kale oo ka dhalan kara isku xidhnaanshaha silsiladda wax soo saarka beeraha iyo ganacsigooda caalamiga ah, waxa ay sabab u noqon karaan cuntada oo yaraata, awoodda wax iibsasho oo hoos u dhacda, arrimahaasina ay dhici karaan in iska hor imaad dhaco.
Si looga bedbaado xaaladahan ka dhalan kara sicir bararka iyo shidaal yaraanta waxay ila tahay in loo baahan yahya.
- In wada-tashi qaran oo ku saabsan kordhinta wax-soo-saarka dalka la yeesho
- Shirkadaha maalqabeenada iyo bangiyada dalku inay kaalin muuqata ka qaatan wax soo saarka guud ahaan, gaar ahaanna quutal daruuriga
- In maalgalin shisheeye loo raadiyo wax soo saarka beeraha ee dalka
- In la xoojiyo barnaamijka xukuumadda ee socda kuna aadan wax soo saarka.
- In kaydka Qaranka la balaadhiyo iyo in xeer adag laga soo saaro xaalufinta dhirta oo lafdhabarta dhaqaale ee dalka waxyeelo wayn ku haysa.
Jamhuuriyadda Somaliland xaaladda dhaqaale ee jirta ee dunida ayay wax la qabtaa, waxaana nalooga baahan yahay dedaal dheeraad ah si baahiyaha shacbiga loo daboolo. Aan maanka iyo qalbiga ku haynno maahmaahdii ahayd
"FADHI IYO FUUD YICIBEED LA ISLA WAA”